I-J-147 Powder (1146963-51-0) Abakhiqizi
I-J147 iyisidakamizwa sokuhlola esinemiphumela ebikiwe ngokumelene nesifo se-Alzheimer kanye nokuguga kumamodeli wamagundane wokuguga okusheshayo. Kuyi-curcumin ephuma ku-curcumin kanye nekhandidethi elinamandla le-neurogenic kanye ne-neuroprotective yesidakamizwa ekuqaleni eyenzelwe ukwelashwa kwezimo ze-neurodegenerative ezihambisana nokuguga ezithinta izindlela eziningi ezithintekayo ku-pathogenesis ye-neuropathy yesifo sikashukela.
Umthamo: 105kg / inyanga
I-J-147 powder (1146963-51-0) ividiyo
I-J-147 powder (1146963-51-0) Imininingwane
Igama Product I-J-147 powder
omqondofana J147; j 147; N-(2,4-Dimethylphenyl)-2,2,2-trifluoro-N'-[(E)-(3-methoxyphenyl)methylene]acetohydrazide
InChI Key I-HYMZAYGFKNNHDN-SSDVNMTOSA-N
Formula Yamamolekhula C18H17F3N2O2
isisindo Yamamolekhula I-350.341 g / mol
I-Melting Point Ayikho idatha etholakalayo
ukubila Point Ayikho idatha etholakalayo
Eimpilo enqunyelwe isigamu sempilo Ayikho idatha etholakalayo
solubility I-DMSO (>30 mg/ml) noma i-EtOH (>30 mg/ml)
Sithempeli le-torage isiqandisini
Isicelo umuthi wokuhlola onemiphumela ebikiwe ngokumelene nesifo i-Alzheimer's kanye nokuguga kumamodeli wamagundane okuguga okusheshisiwe
J-147 Ukubuka konke
I-J-147 powder yaba khona ku-2011 ku-Cellular Neurobiology Laboratory ye-Salk Institute. Selokhu yasungulwa, kube nezifundo eziningi eziqinisekisa ukusebenza kahle kwayo ekwelapheni isifo i-Alzheimer kanye nokubuyisela emuva inqubo yokuguga.
UDkt Dave Schubert nabanye abacwaningi abasebenza naye eSalk Institute badlale indima ebalulekile esifundweni se-curcumin kaJ-147. Ku-2018, izazi ze-neurobiologists zembula indlela yokusebenza kwe-J-147 ye-nootropic neqhaza layo ekuphatheni izifo ze-neurodegenerative.
Ucwaningo nocwaningo lwalo muthi lugxile ekubalulekeni kwawo ekulawuleni isimo se-Alzheimer's. Kodwa-ke, abasebenzisi abanempilo bebethanda izinzuzo ze-J-147 ezinjengokuthuthukisa inkumbulo, ukukhulisa amandla okufunda, nokuvuselela ama-neurons.
Ku-2019, osokhemisi baqala ukuzama i-J-147 Alzheimer's antidote kubantu.
Yini i-Nootropic J-147 Powder?
I-J-147 powder itholakala ku-curcumin ne-Cyclohexyl-Bisphenol A. Isidakamizwa esihlakaniphile sinezimfanelo zombili ze-neuroprotective ne-neurogenic. Ngokungafani nama-nootropics amaningi, i-J-147 anti-aging supplement ithuthukisa ukuqonda ngaphandle kokuthinta i-acetylcholine noma i-phosphodiesterase enzymes.
ICurcumin iyinhlangano esebenzayo ye-turmeric futhi inenzuzo ekuphatheni izifo ze-neurodegenerative. Kodwa-ke, le polyphenol ayiweli kahle umgoqo wegazi nobuchopho. Ngenxa yalokhu, i-J-147 nootropic yaba yi-sub yokugcina njengoba yeqa umgoqo wegazi nobuchopho kalula.
Isebenza kanjani i-J-147?
Kuze kube ngu-2018, umphumela we-J-147 esitokisini uhlala ungaziwa kuze kube yilapho iSalk Institute Neurobiologists isichaze le phazili. Isidakamizwa sisebenza ngokubopha i-ATP synthase. Le protein ye-mitochondrial modulates ukukhiqizwa kwamandla eselula, yingakho, ilawula inqubo yokuguga.
Ukuba khona kwesengezo se-J-147 ohlelweni lomuntu kuvimbela ubuthi obuhlobene nobudala obudalwa yimitochondria engasebenzi kahle kanye nokukhiqizwa ngokweqile kwe-ATP.
I-J-147 indlela yokusebenza izophinda ikhulise amazinga ama-neurotransmitters ahlukahlukene ahlanganisa i-NGF ne-BDNF. Ngaphandle kwalokho, isebenza kumazinga e-beta-amyloid, ahlala ephezulu ezigulini ezine-Alzheimer kanye nokuwohloka komqondo.
Imiphumela ye-J-147 ihlanganisa ukunciphisa ukuqhubeka kwe-Alzheimer's, ukuvimbela ukushoda kwenkumbulo, nokwandisa ukukhiqizwa kwamaseli e-neuronal.
Izinzuzo Ezingaba khona ze-J-147
Isengezo se-J-147 sithuthukisa inkumbulo yendawo neyesikhathi eside. Isidakamizwa siguqula ukukhubazeka kwengqondo phakathi kwabantu asebekhulile abanenkinga yokukhubazeka kwengqondo. I-J-147 iyathengiswa itholakala njengomthamo wokuthenga futhi isizukulwane esisha siyayithatha ukukhulisa amandla okufunda.
Ukuthatha izidakamizwa ze-J-147 ezivimbela ukuguga kuzophinde kuthuthukise inkumbulo, ukubona, nokucaca kwengqondo.
I-J-147 nootropic ivimbela ukufa kwe-neuronal okubangelwa ukucindezeleka okwenziwe nge-oxidative.
Lesi sithasiselo sibuye sivimbele ukusebenza ngokweqile kwama-receptors e-NMDA (N-Methyl-D-aspartate), abhekele ukusebenza kwe-neurodegeneration.
Ukuthatha isidakamizwa i-J-147 kuzokwengeza izici ezithathwe ebuchosheni (BDNF) nezici zokukhula kwemizwa (NGF). La ma-neurotransmitters amabili ahambisa phansi izifo ze-neurodegenerative ezinjenge-Alzheimer's kanye ne-dementia. Ngaphezu kwalokho, i-BDNF ibalulekile ku-neurogeneis.
Ithuthukisa umsebenzi we-Mitochondrial
Ukuthatha isidakamizwa i-J-147 kuzothuthukisa ngokungaqondile amazinga e-ATP ngokukhulisa imisebenzi ye-mitochondrial.
Ukuguga kunesibopho sokuncipha kwe-mitochondria ngenxa yokungasebenzi kahle kanye nokwanda kwezinhlobo zomoya-mpilo osebenzayo. Nokho, isithasiselo se-J-147 silwa nale nqubo ngokuvimbela i-ATP5A synthase. Izifundo ezingenakubalwa zithembele emuthini ukuze welule isikhathi sokuphila komuntu.
Ngokusho kwabacwaningi beSalk, i-J-147 yokwengeza ukulwa nokuguga yenza amangqamuzana asebekhulile abonakale esemusha.
I-mitochondria engasebenzi iyasheshisa inqubo yokuguga. I-homeostasis yeselula izonciphisa, ngakho-ke, ukwehla kokusebenza komzimba. Ngaphandle kwalokho, ukulimala kwamaseli kanye nokuwohloka kwe-mitochondrial kuzokwenzeka ngenxa yokukhiqizwa kweROS (izinhlobo zomoya-mpilo ezisebenzayo). Ukuthatha i-J-147 powder kuzomelana nalomphumela, ngakho-ke, kunciphisa i-senescence.
Ukuguga futhi kuhlotshaniswa nokuncipha kwengqondo kanye nokuphazamiseka kwe-neurodegenerative. Kodwa-ke, okuhlangenwe nakho okuningana kwe-J-147 kuqinisekisa ukusebenza ngempumelelo komuthi ekubuyiseleni ukulahleka kwenkumbulo, ukuthuthukisa amakhono okuqonda, nokwelapha ukuwohloka komqondo, i-Alzheimer's, nezinye izifo ezihlobene nobudala.
Umthamo Ojwayelekile we-J-147
(1) Umthamo ojwayelekile
Umthamo ojwayelekile wansuku zonke we-J-147 uphakathi kuka-5mg no-30mg. Ungakwazi ukuhlukanisa umthamo we-J-147 ube kabili. Ngokukhethekile, umthamo wakho kufanele ube sebangeni eliphansi futhi ulikhuphule ngokusekelwe ekubekezeleleni komzimba wakho.
Lesi sithasiselo sisebenza ngomlomo. Kufanele uyeke ukuyithatha ngokuhlwa noma ebusuku ngoba ezinye izibuyekezo ze-J-147 zithi zingaphazamisa iphethini yakho yokulala.
(2) Umthamo wesineke
Abacwaningi basebenzisa u-10mg/kg wedosi ye-J-147 ukwelapha isifo se-Alzheimer kumamodeli wamagundane.
Noma kunjalo, umthamo wakho kufanele uxhomeke esimweni sakho. Thatha, isibonelo, uma ngemuva kokuthuthukisa ukuqonda kwakho, kufanele uqinisekise ukuthatha i-5mg iye ku-15mg. Ngokuphambene nalokho, ngokuvikelwa kwemizwa nokuphathwa kwezifo ze-neurodegenerative, ungakhuphula umthamo ube ngu-20mg no-30mg.
Ezivivinyweni zomtholampilo ze-J-147, izihloko zizothatha umthamo ngokushesha ngemva kokuzila ukudla kwamahora angu-8.
Umehluko phakathi kuka-J-147 no-T-006
I-T-006 isuselwe ku-J-147 nootropic. Isakhi sakhiwe ngokufaka esikhundleni seqembu le-methoxyphenyl le-J-147 curcumin powder ne-tetramethylpyrazine.
Ukwengeza nge-T-006 cishe izinyanga ezintathu kuzonciphisa inkungu yobuchopho futhi kukhuphule amandla ewonke. Ngaphezu kwalokho, impushana ikhulisa ukukhalipha kwamazwi futhi yenza umsebenzisi azole. Ngokuphambene, okuhlangenwe nakho kwe-J-147 kufaka phakathi inkumbulo ethuthukisiwe, ukubona, nokuhogela.
Ngaphandle komehluko ongasho lutho, lezi zithasiselo ezimbili zinemiphumela efanayo.
Ngabe i-J-147 iphephile uma usebenzisa?
Isidakamizwa se-J-147 siphephile. Kuphumelele ngempumelelo ukuhlolwa kobuthi ekuhlolweni kwezilwane njengoba kudingwa yi-Food and Drug Administration (FDA). Ngaphandle kwalokho, izivivinyo zokwelashwa ze-J-147 seziqhubeke isikhathi esithile.
Awekho amarekhodi emiphumela emibi ye-J-147 kukho kokubili ukuhlolwa kwangaphambi komtholampilo nokomuntu.
Isivivinyo somtholampilo se-J-147
Isigaba sokuqala sesivivinyo somtholampilo i-J-147 siqale ekuqaleni kuka-2019 njengoba sixhaswe ngabakwa-Abrexa Pharmaceuticals, Inc. Inhloso yocwaningo bekuwukukala ukuphepha nokubekezelela ukuthatha i-nootropic, kanye nezakhiwo zayo ze-pharmacokinetic ezifundweni ezinempilo.
Ucwaningo lomtholampilo lwalubandakanya bobabili abasha nabadala. Iqembu locwaningo lalilawulwa ngokungahleliwe, lingaboni kabili, futhi lilawulwa nge-placebo ngamanani akhuphukayo awodwa.
Ekupheleni kocwaningo lomuntu, ososayensi bazosungula umphumela ngokusekelwe emiphumeleni emibi, izinga lokushaya kwenhliziyo nesigqi, izinguquko zomzimba, kanye nezinzuzo ze-J-147 ohlelweni lwezinzwa.
Ukubuyekezwa komsebenzisi / okuhlangenwe nakho ngemuva kokusebenzisa i-J-147
Nazi ezinye zezibuyekezo ze-J-147;
“… Kungabuye kube nomuzwa wamandla amaningi kakhulu ekuqaleni. Hhayi uhlobo lwe-caffeine noma i-amphetamine yamandla, kepha amandla angaphezulu emvelo. Ngisijabulele lesi sigaba kwazise ngikwazile ukucabanga ngokwenza okuthile njengokugibela amabhayisikili, bese ngikwenza ngaphandle kokungabaza noma ukuzikholisa ukuthi ngizoqala. Ukuzikhuthaza kwakungelula. Lokhu kuhlakazeke kakhulu ngemuva kwamasonto ambalwa, futhi ngenkathi ngijabulela lo muzwa, omunye kungenzeka, ngakho-ke ngibhala lokhu njengomphumela ongase ube khona. ”
Imisebenzi kaF5 ithi;
“Kubukeka njenge-nootropic ethokozisayo nethembisayo. Kubikwa ukuthi bekunocwaningo lomtholampilo e-US ngonyaka odlule. ”
Omunye umsebenzisi uthi;
“Kulungile, ngiyitholile izolo futhi sengiphuze i-10mg ngemithamo emi-3. Ngiyithathe ngokungahambisani futhi yancibilika kahle. Ayinambitheki kabi. Umphumela osheshayo waqala ngokushesha kakhulu kimi. Umbono nengqondo yami kwakubonakala kucijile ngandlela thile, kepha kungaba yi-placebo nje. Akubonakali kunomphumela omubi nhlobo, kodwa kusesekuseni kakhulu ukusho… Ngizwe konke kuhamba kahle futhi nginikwe amandla usuku lonke ngomunye u-10 mg ekuseni ngabo-6 ekuseni. ”
"Ngiyaqhubeka nokuthatha i-J147 ngaphandle kwenzuzo ebonakalayo ngaphandle kokunciphisa ukuvuvukala nokuvuvukala okuphawulwe ngaphambili."
Umkhiqizi we-J-147 powder - Singathenga kuphi i-J-147 powder?
Ukuba semthethweni kwale nootropic kuseyithambo lombango kodwa ngeke kukuvimbele ekutholeni imikhiqizo esemthethweni. Phela, izivivinyo zomtholampilo ze-J-147 Alzheimer's ziyaqhubeka. Ungathenga impushana ezitolo ze-inthanethi njengoba uthola ilungelo lokuqhathanisa amanani e-J-147 kubathengisi abahlukene. Kodwa-ke, kufanele uqiniseke ukuthi uthenga kubahlinzeki abasemthethweni ngokuhlolwa kwelabhorethri ezimele.
Uma ufuna ukudayiswa kwe-J-147, ngena nenkampani yethu. Sihlinzeka nge-nootropics eminingi ngaphansi kokulawulwa kwekhwalithi. Ungathenga ngobuningi noma uthenge okukodwa kuye ngomgomo wakho we-psychonautic. Sicela ukhumbule ukuthi intengo ye-J-147 ilungele kuphela uma uthenga ngesamba esikhulu.
Lapchak, AP, Bombien, R., and Rajput, SP (2013). I-J-147 i-Novel Hydrazide Lead Compound yokwelapha i-Neurodegeneration: Ukuhlaziywa kokuphepha kwe-Ceetox TM kanye ne-Genotoxicity. Ijenali yeNeurology neNeurophysiology.
Ngaphambi kwalokho, M., et al. (2013). I-Neurotrophic Compound J147 Ibuyisa Ukuwohloka Kokuqonda Kamagundane Esifo Esikhulile se-Alzheimer's. Ucwaningo Nokwelashwa Kwe-Alzheimer's.
Izidakamizwa ze-Alzheimer Zijikisa i-Clock Emuva ku-Powerhouse of Cell. ISalk Institute.Januwari 8, 2018.
Qi, Chen., Et al. (2011). Isidakamizwa se-Novel Neurotrophic for Enhancement Cognitive and Alzheimer's Disease. Umtapo Wezincwadi Womphakathi weSayensi.
UDaugherty, DJ, et al. (2017). I-Novel Curcumin Derivative for the Treatment of Diabetic Neuropathy.
Lejing, Lian., et al. (2018). I-Anti-Depressant-like Effects Ye-Novel Curcumin Derivative J147: Ukubandakanywa kwe-5-HT1A I-Neuropharmacology.